Orinasa orinasa mpamokatra hazo amidy any Dubai - BusinessFinder.Me
Pabrikanina miasa any an-toerana amina orinasa mpamokatra orinasa mpamokatra hazo na mpamatsy vola (mpiara-miasa). Manana 10 taona ny fisianay eo amin'ny tsena nahatratra tetikasa avo lenta avo lenta izay nanome anay mombamomba mafy dia mafy tohanan'ny katalaogera samihafa an'ny ...
Date : Jolay 31, 2021
Location : Faritra indostrialy Jebel Ali, Jebel Ali, Dubai, UAE
Pabrikanina miasa any an-toerana amina orinasa mpamokatra orinasa mpamokatra hazo na mpamatsy vola (mpiara-miasa).
Manana 10 taona ny fisianay eo amin'ny tsena nahatratra tetikasa avo lenta avo lenta izay nanome anay mombamomba matanjaka tohanan'ny katalaogin-tsokajy misy anay.
Niorina ao amin'ny trano fanatobiana entana 1500 sqm misy ny milina ilaina rehetra amin'ny asa hazo (ao anatin'izany ny cnc) asa vy sy fanaka, koa manana atrikasa sy fiara fitarihana.
Orinasa talantalana amidy # amidy
Orinasa lehibe # hitantana
Orinasa #bizben amidy
#fahafahana amin'ny orinasa latsaky ny 10k
#business hampiasa vola izao
#mividy franchise franchise
#mividy orinasa mora vidy
#Buy dunkin donuts franchise
#buy niorina orinasan-tserasera
#buy tranokala fandraharahana an-tserasera
Orinasa mpamokatra #buyback
#mividy orinasa manana trosa
Orinasa #campground amidy
Orinasa miasa #coin amidy
Fivarotana fivarotana sy fivarotana solika # amidy
#mora mitantana orinasa
# mitady asa hovidiana
gara #gas amidy
Orinasa kely tsara hampiasa vola
#home mihazakazaka hevitra orinasa
franchise #hot hividianana
#money hividianana orinasa
Orinasa tena mihazakazaka farany
fivarotana orinasa vaovao #
Orinasa fivarotana babo amidy
Orinasa #physio amidy
Vidin'ny franchise amin'ny trano fisakafoanana
cafe any ivelany amidy
#fandehanana orinasa miaraka amin'ny vadinao
#fandehanana orinasa tsy misy fahazoan-dàlana
#fandehanana amin'ny asa aman-draharaha
#Running orinasa orinasa mpamokatra Wood amidy any Dubai
#small franchise hamidy
#sm franchise kely hananana
# manomboka ary mandeha
# fanombohana lany vola
Vidin'ny franchise lakolosy #taco
#takeaway amidy gumtree
#takeaway amidy amin'ny gumtree
# lalana hividianana orinasa
#Well Running Wood asan'ny orinasa miasa any Dubai amidy
#Nasa orinasa orinasa tsara amidy
#Nasa orinasa orinasa tsara amidy any Dubai
#Nasa orinasa orinasa tsara amidy any uae
Orinasa efa niorina tsara amidy any Dubai
Orinasa mifehy ny bibikely amidy any Dubai
Kiosk amin'ny rafitra fandoavam-bola amidy any Dubai
Orinasa manofa fiara amidy dia manana fiara 32 any Dubai
Amidy tsara ny fanasan-damba any Dubai